FAST KUTENDA HARD MARI MARI
Real Estate Listings: » Business Directory » Financial Service Providers » US » Pennsylvania » Philadelphia » FAST KUTENDA HARD MARI MARI1
Kugadziriswa kwekupedzisira 2019-10-24
Inoda Mari Yakaomarara Chikwereti kuvhara chibvumirano? Unoda REAL ESTATE kana BUSINESS mari? BP Bhizinesi Boka LLC inopa zvinotevera: Kuzvipira nekukurumidza - Kubvumidzwa mukati memazuva maviri ebhizinesi, Hapana Mari Yakavanzwa, Kuvhara nekukurumidza, Mahara Kubvunza Tinogona kukutumira iwe ruzivo nezve yedu Yakaomarara Mari Chikwereti, Ndokumbira kuti utibate isu kuti tikwanise kusvika kwauri ASAP kana kana iwe uchida kuenderera zvakananga kufadza tinongedze chinongedzo chedu chemahara ongororo uye isu tichaenderera kune inotevera maitiro https: / /bptreegroup.wufoo.com/forms/rdgqju91tt1q77/ Inowanikwa mumatunhu ese eUS
( Makomo eAppalachian anomhanya nepakati. The Commonwealth yakaganhurwa neDelaware kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, Maryland kumaodzanyemba, West Virginia kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, Ohio kumadokero, Lake Erie neprovince yeCanada yeOntario kuchamhembe kwakadziva kumadokero, New York kuchamhembe, uye New Jersey kumabvazuva . Pennsylvania ndiyo inokwana makumi matatu nematanhatu nzvimbo nenzvimbo, uye yechishanu-yakawanda vanhu nyika zvichienderana neyechangobva kuitika official US Census kuverenga muna 2010. Ndiyo 9th-ine vanhu vazhinji kwazvo makumi mashanu. Maguta maviri ePennsylvania anogara vanhu vakawanda ndiPhiladelphia (1,580,863), nePittsburgh (302,407). Guta guru renyika pamwe neguta rahwo regumi ndiHarrisburg. Pennsylvania ine makiromita mazana maviri nemakumi maviri nemashanu (225 km) yemahombekombe egungwa pedyo neLake Erie neRwizi Delaware.Nyika yacho ndeimwe yematongo ekutanga eUnited States. yakavapo muna 1681 semhedzisiro yemubvumirano yenyika yehumambo kunaWilliam Penn, mwanakomana wezita renyika. Chikamu chePennsylvania (pamwe neRwizi rweDelaware), pamwe neNyika yazvino yeDelaware, chakamborongwa seColony yeNew Sweden. Yakanga iri nyika yechipiri yekubvumidza Bumbiro reUnited States, musi waZvita 12, 1787. Imba yerusununguko, pakanyorwazve United States Declaration of Independence uye United States Constitution, iri muguta guru rePhiladelphia. Munguva yeAmerican Civil War, Hondo ye Gettysburg yakarwa muhondo yepazasi mudunhu. Valley Forge padyo nePhiladelphia yaive dzimbahwe raGeneral Washington panguva yechando chinotyisa cha 1777-78.